Khudaarta xagaaga oo leh yaanyo iyo hake la jarjaray | Cuntooyinka Jikada
Maanta waxaan kugu martiqaadayaa inaad diyaariso mid ka mid ah kuwa casseroles -ka oo wax badan kugu fidi doona. Casserole oo leh jilayaal khudaarta xagaaga sida zucchini ama aubergine. Nooc ratatouille ah oo aan sidoo kale ku darnay basal, basbaas, broccoli iyo yaanyo saldhig ahaan.
Cuntadani waxay ka kooban tahay qadar aad u badan oo khudaar ah aad bayna caafimaad u tahay. Waxaad u isticmaali kartaa khudaartaan sida wehelinta hilibka, kalluunka, digirta ama baastada. Sida fudud sida diyaarinta cuntooyinkan iyo isku -darka ama isku -darka khudradda iyo yaanyada.
Markaan joogo guriga, si aan u abuuro saxan aad u dhammaystiran oo uu noogu adeego casho dhowr maalmood ah, waxaan go'aansaday inaan si toos ah ugu daro digsiga shiilan iyo daqiiqaddii ugu dambaysay. Waxaad isticmaali kartaa qaar dhexda hake barafaysan, hore u barafoobay, hake cusub ama ku beddel tan nooc kale oo miisaan ah.
Khudaartaan xagaaga oo leh yaanyo iyo hake la jeexjeexay ayaa ah saxan fudud oo aad u caafimaad badan oo aad ugu adeegi kartid qadada iyo cashada labadaba.
Wadarta waqtiga: 40 m
1 basasha waaweyn
1 basbaas Talyaani cagaaran
Pepper basbaas cas
1 zucchini weyn
Geedka ukunta 1
2 yaanyo aad u bislaaday, diiray
3 qaado oo suugo yaanyo ah
3 xayeysiis hake
Saliid saytuun ah oo bikro ah oo dheeraad ah.
Iska jar basasha iyo basbaas iyo ku dhex kari weel oo leh saddex qaado oo saliid saytuun bikrad ah oo dheeraad ah 8 daqiiqo.
Waxaan ka faa'iideysaneynaa waqtigan si aan u diirno ukunta iyo jarjar labada aubergine iyo zucchini.
Marka xabadaha lagu daro waxaan ku darnaa digsi iyo kari kari kulayl dhexdhexaad ah 10 daqiiqo daboolka leh.
Kadib ku dar broccoli in ubaxyo iyo kariyo oo dhan dhowr daqiiqo oo dheeraad ah.
Marka xigta waxaan cusbo iyo basbaas iyo ku dar yaanyada la jarjaray yaanyo yaryar oo shiilan. Isku qas oo kari 10 daqiiqo oo dheeraad ah si yaanyada u kala daadato.
Ugu dambeyntii waxaan ku darnaa hake dabacsan, isku dar oo kari laba daqiiqadood oo kale.
Waxaan isku daynaa oo haddii loo baahdo aan saxno barta milixda.
Waxaan ku raaxaysanay khudaarta xagaaga oo leh yaanyo iyo hake la jarjaray.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » General » Khudaarta xagaaga oo leh yaanyo iyo hake la jarjaray
Kaluun dubay baradho iyo basbaas